Gabdhaha Muqdisho Oo soo bandhigay muuqaal ay ku soo jiidanayaan dhalinta ay Jeebabkoodu qoyan yihiin - iftineducation.com
Gabdhaha Muqdisho Oo soo bandhigay muuqaal ay ku soo jiidanayaan dhalinta ay Jeebabkoodu qoyan yihiin
iftineducation.com – Gabdhaha ku dhaqan Caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa bilaabay barnaamijyo dabacsan oo ay ku soo jiidanayaan dhalinta ay Jeebabkoodu qoyan yihiin ee dhawaan ka yimid Wadamada ka tirsan Qaarada Yurub.
Gabdhahaani oo koox koox u socda ayaa dhoolacadeyn ku qaabilaya dhalinyaradaas ayagoo markaa kadibna ka qaadaya lacago ay ku tilmaameen dhac dhac ay ku maareynayaan qurxinta Naftooda.
Sheekada soo jiidashada leh ayaa waxa ay tahay in Gabdhahaaasi is tusinayaan wiilasha gacanta furan ee lagacaha fowqal caqliga ah ku qubaya jeebabkooda.
“Lacag 150 dollar u dhiganta ayaan bil kasta ka qaadaa wiil aynu saaxiibo nahay , waxaana taa dheer Kaararka ku hadalka ah ee uu ku soo cabeynayo Mobile-keyga” ayay tiri Gabadh lagu magacaabo Asmo oo la hadashay Warbaahinta jowhar24.
“Ma xuma inaad macaansatid lacag fudeed kuugu soo gashay, waana garanayaa raga wax bixiska yaqaana” ayay ku kaftantay Gabadhaasi.
“Waan iska ilaalinaa raga ka yimid dalka Koofur Africa, waayoo waxay doonayaan inay horey kaa guursadaan mana ogola inay Jeebabka gacanta galiyaan inta uu socdo wada xaajoodka” ayay Asma yarey sii raacisay hadalkeeda.
Si kastoo ay ahaataba Dumarka Soomaaliyeed ayaa caan ku ahaa xishood iyo ka cararida raga Beesada bixiya, arintaan ayaana noqonaysa Barnaamij cusub oo Qatar ku ah Dhaqanka Islaamka iyo kan suuban ee Soomaaliyeed.
7 Arrimood Oo Nin Kasta Xaaskiisa Ka Rabo Inay Samayso Isagoo Aan U Sheegin
Daawo Imaamka Xaramka oo si dirqi ah ku dhameeyay tujinta salaadii maqrib: VIDEO